SIDA LOO XAKAMEYNAYO SABIIBTA QABOOBAHA EE QABOOJIYAHA: TALAABO TALLAABO AH OO LA QAADO SAWIRRADA - MAYDH
Ugu Weyn Ee Maydh
Sida loo xakameynayo sabiibta xilliga jiilaalka
Noloshu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan uguna macaan, oo aanad adigu si kakan u samayn karin jikada. Intaa waxaa dheer, shaaha laga sameeyey caleemaha dhuuban waxay ku haboonaan doonaan goryaan kasta. Intaa waxa dheer, nasiib daro, iyadoon loo eegin nooca, waa mid ka mid ah daawooyinka dhaqameed ee ugu fiican, qaybta ugu weyn ee decoctions ee loogu talagalay in laga bogsado cudurrada. Marka la eego arrimahan, macaamiishu waxay inta badan la yaaban yihiin sida loo dhigo midhaha cusub ee qaboobaha. Habka ugu fiican ee lagu gaari karo hadafkani waa in la xakameeyo jajabka, sirta ugu weyn iyo hababka looga hadli doono.
Dhageysi ku saabsan geedo baraf ah oo udgoon leh, dad badan ayaa ku waydiinaya su'aal ku celcelis ah, miyay suurtagal tahay in la qaboojiyo marmarka. Waxaan xaqiijinaynaa inaanay suurtogal ahayn keliya, laakiin waa lagama maarmaan, tan iyo markii loo qoondeeyay dhaqankaan faa'iidooyin badanhaddii la barbardhigo nidaamkan qalajinta:
Bacaha cagaaran ama caleemaha dhaqanka si buuxda u haysta dhadhanka iyo dhadhanka.
Inta lagu jiro geeddi-socodka lagu keydiyo, kiniinada fitamiinada ayaa la ilaaliyaa, taas oo keenaysa faa'iidooyin qiimo leh jirka jirka.
Frost waa fursad gaar ah oo lagu raaxaysto shaaha laga helo shimbiraha cusub xilliga jiilaalka, ku qurxin caleemaha saladhyada cusub iyo macmacaanka.
Midabka caleenta cagaaran ee dhaqanka waa mid buuxa oo iftiin leh, oo aan lagu guuleysan karin qalajinta.
Nidaamkan kaydinta dhir udgoon ee udubku waa mid sahlan oo qof walba loo heli karo, uma baahna qiimaha iyo waqtiga.
Ma taqaanaa? Thanks to aroma gaar ah oo aan la dabooli karin, naasku wuxuu noqday mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan-ka dib markii loo baahdo diyaarinta cadarka, lab iyo dhedig iyo lab. Waa wax yar oo ka mid ah urta aduunka ugu caansan.
Goorma ayay ku habboon tahay in la ururiyo
Badanaa dadku waxay ka cabanayaan in ay u hoggaansamaan dhammaan shuruudaha lagu diyaarinayay qalabka saxda ah, laakiin saameyntu ma ahan mid isku mid ah: miinada shimbiruhu waxay ku dhowdahay dhadhan soo jiidasho leh. Wax walbaa waa, dhaqanka waxaa la ururiyey waqtigii khaldanaa. Muddadii ugu fiicnayd ee ururinta cagaarka - marxaladda ubaxa. Waxay ahayd waqtigan in waraaqaha, ubaxyada iyo caleemaha dhirta ay ku ururaan saliidaha ugu muhiimsan, mentoolka iyo nafaqooyinka, taas oo ka mid ah waxyaabo kale, soo saarayaasha urta oo kordhay.
Haddii aad rabto inaad diyaariso caleemaha miraha, waa in la soo ururiyaa ka hor inta ubax, marxaladda samaynta florescences. Rabitaanka in la diyaariyo oo dhan afkoda, iyaga jaray kaliya waqtiga ubax, taas oo dhacda dabayaaqadii July - horraantii Agoosto.
Ma taqaanaa? Peppermint waa mid ka mid ah daawooyinka dabiiciga ah ee ugu awoodda badan. Waxay awoodaa in ay yareeyso buufiska iyo caajis xitaa inta lagu jiro burburinta nerwada. Taasi waa sababta ay daweeyeyaasha neurfureed ku talinayaan in ay isticmaalaan shaaha mintiga ka dib maalin kasta oo shaqo adag, ama ka dib xaalado walaac leh.
Nidaamka diyaarinta jajab ee lagu keydsho waa mid fudud: caleemaha caafimaadka leh iyo dhaqanka afkoda ayaa loo baahan yahay in si fiican loo dhaqo biyo socda. Nadiifi shaqooyinka waa in la dhigaa shukumaan, ama lagu xidho suunka si uu si fiican u qalajiyo.
Siyaabaha lagu xakameynayo
Macmacaadda qalabka wax soo saarku waa nidaam cusub oo dhowaan bilaabay in lagu soo rogo. Inkastoo tani jirto, waxaa jira siyaabo badan oo lagu xakameyn karo dalagyada: caleemaha, dhirta, dhirta la jarjaray iyo barafka. Xulashada ugu dambeysa waa raadinta kuwa raba in ay ku xakameynayaan sabiibta qaboobaha ee Mojito.
Baro sida loo qalajiyo sabiibo jiilaalka, si loo ilaaliyo dhadhanka iyo tayada caafimaad, iyo sidoo kale sida loo sameeyo miro yar.
Caleemaha oo dhan
Wixii habkan lagu xakameynayo waxaad u baahan doontaa inaad doorato caleemaha caleenta caafimaad leh, iyada oo aan wax magdhow ah iyo lebbiska. Caleemaha banaan waa in lagu soo xiraa weel caag ah ama gasacadaha yar yar oo dhig meel qaboojiyaha. Si loo ilaaliyo sharafta caleemaha waa bangiyada ugu haboon. Laguma talin in la jarjaro caleemaha, sababtoo ah waxay luminayaan wax soo jiidashada.
Si loo yareeyo caleemaha dhirta jiilaalka guud ahaan waa xalka ugu fiican ee u oggolaanaya isticmaalka warshad saliideed jiilaalka labadaba shaaha iyo macmacaanka.
Kabaha oo dhan
Marka lagu daro caleemaha, waxaad sidoo kale xiri kartaa maraqa yaryar oo dhan. Mitraga la soo ururiyey ee warshadda ayaa baaraya, nadiifin iyo maydhasho. Ka dib qalajinta, waxay ku duuduuban yihiin caag balaastig ah, dabacsan ama bac caag ah oo joogto ah, isku dayaya in aan la tuujin laanta, oo lagu dhigo qaboojiyaha.
Waa muhiim! Waxaa haboon in la xusuusto in caleemaha dhuuban, oo aad udheeraato, waa inay noqdaan kuwo cusub, kiis kasta, ha u ogolaanin inay ku dhacaan qaboojiyaha. Fadlan ku xisaabtan dhadhanka iyo nafaqooyinka.
Sare jar jartey
Habkani ma aha mid inta badan la qabsado, maadaama la rumeeysan yahay in geeddi-socodka jajabinta cuntooyinka ceymiska ah lumiyo dhadhanka cajiinka ah iyo casiir, kaas oo xubno waxtar leh oo xooggan.
Si kastaba ha ahaatee, tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu jaro. Alaabada ceeriin ee la soo ururiyey waa la jajabiyey (waxaad jari kartaa mindi, waxaadna isticmaali kartaa blender ama processor processor). Waxyaabaha soo go'ay waa in la googooyaa wax yar oo jaban ah oo la qaboojiyey, ka dib, taas oo horey loo sii deyn jiray, leysku daadiyey baakad dheeri ah oo shaabadeeyey.
Waa muhiim! Waxaa ugu wanaagsan in la qaboojiyo maro heerkul ah -18 ° C ilaa -23 ° C.
Kalluunnada dufanka leh caleemaha dhadhanka ah ayaa ah hab fiican oo loo maareyn karo cabitaannada dhadhanka leh iyo kuwa la isku qurxiyogaar ahaan, "Mojito". Waxaan kugula talinaynaa qashinka cagaarka ah ee fudud sida loo xakameyn lahaa midab kiilo.
Si aad u hirgeliso farsamadan, waxaad u baahan tahay weelal baraf ah ama wax yar oo silicone ah, kaas oo caleemaha gaduudan la dhigo oo lagu shubo biyo qabow la qaboojiyey, sidaas darteed cidhifyada caleemaha waxay ku jiraan biyaha. Taas ka dib, weelasha waxaa lagu dhejiyaa qaboojiyaha. Marka kowadaha la qaboojiyey, waxay ku daadi karaan baako weyn oo loogu talagalay kaydinta sahlan.
Baro sida loo xoqdo strawberries jiilaalka, blueberries, jeeriga, tufaaxa, yaanyada, dabacasaha, galley, broccoli, sprouts, boogaha, cadarka (cad), digir cagaaran, eggplant, bocorka.
Ma jiro nolol dabeecad oo sax ah oo loogu talagalay naas. Si aad u fahamto in xilligan uu dhacayo, waxaa suurtagal ah habka ay alaabtu u lumayso dhadhankiisa iyo guryaha la yidhaahdo.
Waa muhiim! Waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho naaso barafaysan muddo hal sano ah, iyada oo ku xiran xaaladaha kaydinta heerkulka kor lagu soo sheegay.
Sideen u isticmaali karaa
Noocyada qaboobaha ayaa ah midka ugu wanaagsan ee loogu talagalay in lagu sameeyo shaaha daawada udgoon ee xilliga qaboobaha, taas oo aan kaliya ku dhaqmi doonin, laakiin sidoo kale waxay ka caawineysaa in lagu jabiyo hargabka caadiga ah, dhibaatooyinka leh habka dheef-shiidka iyo cudurrada kale. Caleemaha dhuuban ee la jajabiyey ayaa ah qeyb ka mid ah daaweynaha guriga lagu jecel yahay: labada macaan iyo koorsooyinka ugu muhiimsan. Kalluunka la barafoobay waxaa loo isticmaalaa in lagu kariyo hilibka, khudaarta, saladhyada, maraqa, suxuunta kalluunka, digirta kala duwan.
Kareemka yar yar ee dusha maadada ah - dhadhan fiican oo dheellitiran ku dhowaad kasta oo cocktail ah (khamriga ama aan khamri ahayn), qaybo caraf ah oo cusub, smoothie ama compote caadiga ah. Cuntada "Mojito" waxaad u baahan tahay inaad doorato caleemaha ugu quruxda badan.
Noloshu waa mid aad u fudud in lagu jahwareeriyo melissa. Sidoo kale akhri wax ku saabsan noocyada, guryaha faa'iido leh, koritaanka guriga iyo dhulalka furan oo udub dhexaad ah "qaraabo" naas - liin.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo xakameynayo guntiga jiilaalka. Farsamadani waxay u oggolaanaysaa inaanay kaliya u jeesan karin kuwa ay jecel yihiin iyo martida leh dhadhanka iyo dhadhanka jilicsan, laakiin sidoo kale waxay la soo baxaan qadar qiimo leh oo fiitamiino ah iyo walxo caafimaad leh xilliga jiilaalka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Maydh 2019